केकेएसले खोज्यो बाटो - खबरम्यागजिन
Homeखबरकेकेएसले खोज्यो बाटो
केकेएसले खोज्यो बाटो
November 28, 2018 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि खबर 0
कालेबुङ, 28 नोभेम्बर
दुईवटा बाटो निर्माण विषय लिएर कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले कालेबुङ जिल्लापाल डा. विश्वनाथलाई भेट गऱ्यो। विशेष पर्मनसिंह स्कुल जाने अनि दन्ते गाउँ जाने बाटो निर्माण सुचारू गरिदिने आग्रह स्वरूप जिल्लापाललाई भेट गरिएको केकेएस मूल सचिव विष्णु छेत्रीले जनाए।
छेत्री अनुसार आरआईडिएफ विभाग अन्तर्गत दुईवटा बाटो सेङ्कसन भएको थियो। एउटा सितलवनदेखि पर्मनसिंह स्कुलसम्मको5कि. मि को बाटो, जो 2015 मा नै निर्माण कार्य समाप्त हुनपर्ने हो। अर्को, दन्ते गाउँदेखि लोवर दन्ते गाउँसम्मको लगभग4कि. मि. को बाटो, जो 2012 मा नै समाप्त गरिनुपर्ने हो। तर दुवैवटा बाटोको निर्माण कार्य अहिलेसम्म पनि समाप्त गरिएको छैन।
यस विषय लिएर केकेएसले नाबार्डसित सभा बसेर चर्चा गरेको थियो। डिडिएम नाबार्ड अनि सिजिएम नाबार्डलाई पनि सङ्गठनले संज्ञानमा लिएको थियो। त्यससँगै सङ्गठनले कालेबुङ जिल्लापाललाई पनि पत्राचार गरेको थियो। जिल्लापालले बाटोको निरीक्षण गरेपछि विभागसित बातचित गरेका थिए। त्यसपछि दुवैवटा बाटो निर्माणको काम पुन सुचारू भएको थियो। तर 8-10 दिनपछि बाटो निर्माणको काम पुन स्थगित गरिएको छ।
छेत्रीले भने अनुसार यो परियोजनामा जुन रकम खर्च हुन्छ, त्यो कर दाता (ट्याक्स पेयर) हरूको पैसा हो। यसको दुरूपयोग भइरहेको छ। यहीँ कुरा अवगत गराउन सङ्गठनले आज जिल्लापाललाई भेट गरेको हो। दुवैवटा बाटो निर्माण कार्यलाई पुन सुचारू गर्न विभागलाई हस्तक्षेप गरिदिने आग्रह जिल्लापाललाई गरियो। दुवैवटा गाउँमा प्राय: खटिखाने मजदुरहरू बसोबास गर्छन्। गाईको दुध बेचेर जीवन धान्नेहरू छन्। बाटो अधुरो भएकाले स्कुल पढ्ने नानीहरू, कृषकहरूलाई व्यापाक असुविधा भइरहेको छ। यही समस्या जिल्लापाललाई अवगत गराइयो। जिल्लापालले बाटो निर्माणको काम पुन सुचारू गर्न विभागलाई हस्तक्षेप गरिदिने प्रतिश्रुति दिएको छेत्रीले बताए।
योगवीर शाक्य, टाशी भोटिया र टी. छिरिङलालाई विदाई